कोरोनाले विदेशमा १४३ नेपालीको मृत्यु, यो साता मात्रै १३ नेपालीले ज्यान गुमाए – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ००:५२ English
कोरोनाले विदेशमा १४३ नेपालीको मृत्यु, यो साता मात्रै १३ नेपालीले ज्यान गुमाए
लण्डन, २१ असार । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विदेशमा यो साता थप १३ जना नेपालीको ज्यान गयो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार युएईमा थप ६, भारतमा ५ जना, ओमानमा १ जना र कुवेतमा १ जना नेपालीको ज्यान गएको हो ।
समितिका अनुसार शनिबार साँझसम्म १४ देशमा १४३ जना नेपालीको कोरोना संक्रमणले ज्यान गएको छ । हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड र स्वीडेन, ओमान लगायत देशमा रहेका नेपालीहरुको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ ।
एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार मध्यपूर्वका देशबाहेक अन्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको बढ्ने दर न्युन हुँदैगइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
समितिका अनुसार शनिवार साँझसम्म विदेशमा २८ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने २५ हजार २ सय २६ जना गैरआवासीय नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन् । एनआरएनएका अनुसार हालसम्म विश्वभर ३७ देशमा रहेका नेपालीहरु कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् ।
१८ हजार २ सय बढीको उद्धार
कोरोना भाइरसका कारण बिभिन्न देशमा रोकिएका नेपालीहरुको उद्दार तीब्र गतिमा भईरहेको छ । १२ औँ पटक अपडेट सार्वजनिक गर्दै एनआरएनले विदेशस्थित नेपाली कुटनीति नियोगसँग मिलेर जुनको पहिलो सातादेखि हालसम्म २१ देशबाट १८ हजार २९३ नेपालीको उद्दार गरिएको जनाएको छ ।
अफगानिस्तान, अष्ट्रिलिया, ओमान, कतार, म्यानमार, कुवेत, जापान, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, वंगलादेश, मलेसिया, माल्दिभ्स, श्रीलंका, युएई, साउदी अरब, सिंगापुर, हङ्गकङ्ग, पाकिस्तान, बहराइन, अमेरिका र बेलायतलगायतका देशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किएका छन् ।
११५ शव नेपाल ल्याईयो
यसैबीच विदेशमा निधन भएका नेपालीको ३५२ शवमध्ये ११५ जनाको शव नेपाल ल्याएर अन्त्येष्टि गरिएको छ । बाँकी १०५ शवको व्यवस्थापनको काम बाँकी छ । ती शवमध्ये १३२ जना नेपालीहरुको शव परिवारको सहमतिमा विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म १५ हजार ४९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिए पनि हालसम्म ६ हजार ४१५ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
२१ असार २०७७, आईतवार ०९:०९ मा प्रकाशित